o.Ragga Waa Ka Mamnuuc: Ma Rabtaa In Aad Qalbiga Ninkaado Xado , Furayaashaan Adeegsi | alcarabiya.com
Home » Arimaha Qoyska » o.Ragga Waa Ka Mamnuuc: Ma Rabtaa In Aad Qalbiga Ninkaado Xado , Furayaashaan Adeegsi
o.Ragga Waa Ka Mamnuuc: Ma Rabtaa In Aad Qalbiga Ninkaado Xado , Furayaashaan Adeegsi	Waa talooyin muhiim oo ku socota xaas waliba si ay u farxad giliso lamaanaheeda nolosha, waxaadna ogataa gabaryaheey in haddii arimahaan aad u sameeyso qalbiga ayuu ka qoslayaaa ninkaada .
1- U Muuji jaceylka aad u qabto una xaqiiji sida in aad telka kula xariirto marka uu ka soo daaho soo laabshada guriga xitaa hadaad careysan tahay .
2- Diyaarinta cunnada uu jecel yahay xiligeeda hana sugin in uu ka dalbado.
3-Xabad gili isla markaana dhunko marka uu guriga ka baxayo iyo marka uu soo galayo .
4- Kaga hortag adiga oo xiran labiskaada kan ugu qurxoon hana iloobin dhoola cadeynta sixirka .
5- Mar waliba wanaag uun ka fillo , kuna kalsoonaaw.
6- Ehelkiisa wax wanagsan mooyee waxa kale haka sheegin , hana iloobin mar waliba oo aad hooyadiisa booqaneyso in aad hadiyad u sii qaado.
7- Uga dhig gurigaada beer uu ku nasto , qurxi oo marba habeynta guriga nooc ka dhig , walxaha udgoonna kan ugu fiican ku carfi guriga .
8- Daryeel oo ihtimaam aad u sareeya sii martidiisa , hab ka bad badinna ah u casuun .
9- U Dhoola cadeey mar waliba oo indhihiisa ay ku milicsadaan.
10- Maqalsii erayada kuwo uga macan iyo eray bixinta tan ugu fiican sida indhaheygiyoow, qalbi .
11- Aad u daryeel naafada caruurtiisa ,
12- waligaa iska ilaali in codkaada ka sara maro kiisa xiaa hadaad kaftameysid .
13- Marka uu xaafada jooga waligaa hakaga mashquulin ku hadalka taleenka , daawashada Tv-ga ama aqrinta joornaalka .
14-Haddii uu ku kaxeeyo suuqa qaado ra`yigiisa ku aadan wax aad iibsaneyso ugana mahad celi dookhiisa .
15-Haddii aad joogtaan guriga qoyskiisa ama kaaga ugu yeer Xasan Aabihiisoow ama maxamed aabihisoow adiga oo u muujinaya qadarin.
16- Hadii uu safar aadayo ha iloowin in aad waraaq u qorto oo aad ugu muujineyso sida aad ugu xiiseyso, dharkiisana qaarkood ugu sii carfi catarkaada si uu kaaga soo xasuusto.
17-Haddii aad la xanaaqdo oo uu kaaga cudur daarto duraba ka qaado oo dhunko , haddii uusan kuu cudur daarinin adiga bilaaw haka sugin .
18- Hadddii aad wada joogtaan suuqa ama goob kale oo ay ku badan yihiin ragga hoos u dhig madaxada indhahagaan ka daboolo ragga kale una sheeg in uu yahay qurux uu ilaah ku maneystay , allana u mahad celi .
Waa Inoo Muhiim Aqriste Fikirkaada Wanaagsan, Waadna Ku Mahadsan Tahay
13 Responses to o.Ragga Waa Ka Mamnuuc: Ma Rabtaa In Aad Qalbiga Ninkaado Xado , Furayaashaan Adeegsi	Sareedo Reply
November 19, 2012 at 9:11	Asc dhaman. hablow waanada halaqaato guryahena iyo ragena unbaa inogu wanagsanaanaye takale anigu waxan odhan lahaa hablaha iyo wilashu hays aaminaan cambaarayntana hayska daayaan wixii qaldana qolo walba xageeda haka saxdo. By
ciyaalki cali kamiin Reply
November 15, 2012 at 9:11	ani waxaan aminsanahay in gabdhaha somaliyeed qaar samaykaraan waxkamid ah qormadaan sameeyaane
midda kale ragga dhahaaya gabar somaliyeed saas lagama helo hadii adin nasiibka saas noqday gabdhaha yaan loo gafin qofkasta nasiibkisa uu cunaa
November 14, 2012 at 9:11	Kkk sahra kulahaa bac madow banaanka laguu dhigaa hadii aanba africa katago haba la.ii dhigo tan kale naag soomaaliyeed intaas maba laga helaayo lkn wax noo dhaamo ma.arkeyno
November 14, 2012 at 9:11	aniga golley qof wanaagsan waan helay anigan waan u wanaagsanahay sidaan la sheegayn inta badan dhaqankeega ayaya ka mid tahay lakin malinti naag li keene ma sheegin ina xuman doono markaasan waa qasab
November 14, 2012 at 9:11	asc…………… asaxabta alcarabeya aad bad u mahadsantihiin,,,,,, raga somaliyeed waxaas mayaqanaan hadinah losameyo oo wax fahmidiido yaa wadi karo sheko aan laku ogeen
November 13, 2012 at 9:11	nimanka naagaha somaliyeed shakiga kaqabaan waa kuwa markii hore aamin sanaa naagta in loo soo guursaday shaqada gurika sida iyadoo dharka kuu dhaqda rashinka kuu kariso hadii aad intaas ku dalisay maba heleso fursad ee kula raxesato ee xowsha gurika yanan laku fiirsan kuwa somali jogoo kuwa kale waba ku qasab hadii kale bacdii madooweed banaanka ku taal walaa raga xal ayaa loo helay markii africa laka soo tagay shaqada caba ina abtiyaal
November 11, 2012 at 9:11	yaa laga helaa taas hadii laga heli lahaa hablaha soomaaliyeed marxabentan oo kale naag garooba lama arken ayan qabaa hadii la waaniyo sidaan oo kale ma ogi ku wada ilaa ey cagaha noga lee faan
June 11, 2012 at 9:11	Asc all alcarabiya waa sax eraygaas aniga naagteyda haday intas isamen 8saac habeen nimo ayan furaa
June 11, 2012 at 9:11	walaalo asiya raga soomaliyed maxaye aqbaan intaa iyo ka badanba laa loo samayen karaa waan loo samiiya adiga raga oo dhan dhabarka kuma saaran ee fariinta qaado oo kaaga kula dhaqan mid ha ilaawin qofku waa sida aad ka dhigato ama aad ula dhaqanto
June 11, 2012 at 9:11	walaalo asiya raga soomaliyed maxaye aqbaan intaa iyo ka badanba laa loo samayen karaa waan loo samiiya adiga raga oo dhan dhabarka kuma saaran ee fariinta qaado oo kaaga kula dhaqan mid ha ilaawin qofku waa sida aad ka dhigato ama aad ula dhaqantp
hanad cade Reply
June 11, 2012 at 9:11	Azio adiga dabal atahaye yarabo warkaga hadii adan usameyn ninkaga sida ey shegty alcarabiya walagu furaa makacsatayahay
June 11, 2012 at 9:11	Asiya sis farintan raga kuma socoto ee hablaha siday ola dhaqmi lahayrn saygoda ka hor ciyrarta aa laga hadloya.
June 11, 2012 at 9:11	Alcarabiya adikan booot lee heesin niin somali aa wax fican u sameeney iska dhaaf in madalked laguusameyo hadii thks lagaa iloibin iska dhaaf in xabiibti lagu dhaho oooh